बहुउपयोगी कृत्रिम जलाशय, आरोग्य जलाशयमा दुई क्वीन्टल माछा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / बहुउपयोगी कृत्रिम जलाशय, आरोग्य जलाशयमा दुई क्वीन्टल माछा
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड May 19, 2019	0 86 Views
घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेका कृत्रिम जलाशयहरु बहुउपयोगी बन्दै गएका छन्। पानीको स्रोत बढाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका जलाशयहरु अहिले बहुउपयोगी बन्दै गएका हुन्। जलाशयको पानीले सिंचाई मात्रै नभई बहुआयामिक आयस्रोतका रुपमा विकसित ह“ुदै गएका छन्।
सयांै बिगाह जमिनमा सिंचाई, डुंगा सयर, माछा पालनस“गै पर्यटकहरु रमाउने स्थल जलाशय बनेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र अहिले १२ वटा जलायश आम्दानीको स्रोत बनिसकेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा छवटा जलाशय बनिरहेका छन्।
यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित आरोग्य जलाशयबाट करीब दुई क्वीन्टल माछा निकालिएको छ। यसअघिका वर्षहरुमा पनि सो जलाशयबाट माछा निकालिएको थियो। आरोग्य टोल विकास संस्थाको संरक्षणमा रहेको कृत्रिम जलायशबाट विभिन्न जातका माछा निकालिएको छ। टोल विकास संस्थाका सदस्यहरुले एक किलोका लागि एक सय ५० रुपैया“ र त्यो भन्दा बढी खरीद गर्ने सदस्य र अन्यलाई एक किलोको दुई सय ५० रुपैया“मा बिक्री गरिएको आरोग्य जलाशयका अध्यक्ष हिरामणि पोखे्रेलले बताउनुभयो। शनिवार बिहानैदेखि जलाशय संरक्षण समितिका सदस्यहरु माछा मार्न लागिपरेका थिए।
यसैबीच यस वर्ष जलाशयलाई थप फराकिलो बनाउने काम पनि शुरु भएको अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो। नगरको बजेटबाट ड्याममा
डेढ लाख रुपैया“ खर्च गरेर विस्तार गर्न लागिएको हो।
साथै उक्त जलाशयको पानीले करीब ५० बिगाह जमिनमा सिंचाई पु¥याउ“दै आएको छ। एक सय घरधुरी उक्त जलाशयको उपभोग गर्नेहरु रहेको आरोग्य टोल विकास संस्थाका सदस्य तुलसी पोख्रेलले बताउनुभयो। जलाशयको पानीले बाह्रैमास करीब एक सय विगाह जमिनमा सिचाई गर्दै आएको उहा“को भनाइ छ।
Previous: हिलाम्मे र धुुलाम्मे खोला कहिलेसम्म ?
Next: नेपालमा दुग्ध व्यवसायको सम्भावना र पूर्व–शर्तहरु